‘प्राइम लाइफ एकल भुक्तानी जीवन बिमा योजना’ - Karobar National Economic Daily
‘प्राइम लाइफ एकल भुक्तानी जीवन बिमा योजना’
query_builderJuly 16, 2017 11:23 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2147
कल्पना गर्नुहोस् तपार्इं कति उमेरसम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ ? पक्कै पनि निश्चित उमेरसम्म मात्र तपार्इं आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ । उमेर रहुनन्जेल त काम गर्नु होला तर, काम गर्न नसक्ने अवस्थाका बारेमा सोच्नुभएको छ ? तपाईंले काम गर्न नसक्दा आवश्यक पर्ने आर्थिक रकम कसरी जोहो गर्नुहुन्छ ?
हुन त मानिसहरूमा बढ्दै गएको बैंकिङ पहुँच र साक्षरताका कारण केही मानिसले धेर थोर बचत गर्छन् । तर, त्यो बचतले तपाईंको जीवनमा आई पर्ने अनिश्चित जोखिमहरू वहन गर्छ त ? यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ तपाईंले खोज्नुभएको छ बिमा योजना खरिद गरी भविष्य सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ ।
मानिसहरूले आम्दानी गर्न सक्ने निश्चित अवधि र भविष्यलाई परिकल्पना गरी प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एकल तथा निश्चित अवधि भुक्तानी बिमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो योजनाअनुसार तपाईंले एकैपटक बिमाशुल्क भुक्तानी गरी निश्चित हुनु सक्नुहुनेछ । साथै यस बिमा योजनाअन्तर्गत तपाईंले आफ्नो सुविधाअनुसार एकमुष्ठ वा निश्चित अवधिसम्म मात्र पनि बिमाशुल्क तिर्न सक्नु हुनेछ । अर्थात् तपाईंले आफ्नो आम्दानी हुने अवधिसम्म मात्र बिमाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरी पनि यो योजना खरिद गर्न सक्नुहुनेछ ।
यो योजनाको न्यूनत्तम बिमांक ५० हजार छ भने अधिकत्तम बिमितले चाहेअनुसार गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी यो योजना खरिद गर्नका लागि न्यूनत्तम १६ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । अधिकतम ६० वर्षसम्मको व्यक्तिले यो योजना खरिद गर्न सक्नेछन् । न्यूनत्तम बिमा अवधि ५ बर्षको हुनेछ भने अधिकत्तम ३० वर्षको हुन्छ । बिमा अवधि समाप्तिमा पुग्ने अधिकत्तम उमेर ७० वर्ष छ ।
१. आफ्नो चाहनाअनुसार एकल वा निश्चित अवधिसम्म मात्र बिमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकिने ।
२. बिमा अवधि समाप्तिमा बिमांक तथा नियमानुसारको बोनस एक मुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ ।
३. बिमा समाप्ति हुने मिति अगावै बिमालेख चालू रहेको अवस्थामा बिमितको मृत्यु भएमा बिमालेख शर्तहरूको अधिनमा रही बिमांक रकम तथा नियमानुसारको बोनस बिमालेखअन्तर्गत इच्छाइएको व्यक्तिलाई एकमुष्ठ भुक्तानी दिइनेछ ।
अ) दुर्घटना मृत्यु लाभ (एडीबी) : यो ऐच्छिक सुविधा हो । बिमितले यो सुविधा लिन चाहेमा दुर्घटना मृत्यु लाभबापतको बिमा शुल्क भुक्तानी गरी यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । बिमितको दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भएमा बिमालेख साथ जारी गरिनेछ दुर्घटना मृत्यु लाभ पूरक करारमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
आ) बिमा शुल्क छुट तथा अपांग अशक्त सुविधा : बिमितले यो सुविधा लिन चाहेमा दुर्घटना मृत्यू लाभबापतको बिमा शुल्क भुक्तानी गरी यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । बिमितको दुर्घटनाको कारणले अंगभंग भई स्थायी अपांग भएमा बिमालेख साथ जारी गरिने बिमाशुल्क छुट तथा मासिक आय सुविधा पूरक करारमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
यी दुवै सुविधाहरू बिमितले ७० वर्षको उमेरसम्म पाउने छन् ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स बिमा योजना